Ny MacBook vaovao, ilay solosaina finday tena izy fa tsy an'ny rehetra | Vaovao IPhone
Na dia ny Apple Watch aza no mpilalao voalohany, dia nisy ny fandefasana Apple izay nahazoany tombony manokana tamin'ny Keynote sy lahatsoratra maro tao amin'ireo bilaogy manokana rehetra androany: ny MacBook vaovao. Solosaina finday tena izy izay misy famolavolana sy famaritana mahavariana fa mampiady hevitra ihany koa, satria ny seranana USB-C tokana dia tsy maharesy lahatra ireo mpampiasa maro izay mitsikera ny fanapahan-kevitr'i Apple hanafoana karazana seranan-tsambo hafa, afa-tsy ny mpampitohy. Ho an'ny headphones. Na dia izany aza ity MacBook 2015 ity dia tonga mba hahazo ny loka "laptop tena izy", zavatra izay mahatratra vokatra vitsivitsy mifaninana. Saingy tsy midika izany fa vokatra mety ho an'ny rehetra izy io.
1 Fahaleovan-tena mandritra ny tontolo andro
2 Kitendry feno ary ahazoana aina kokoa
3 Ao anaty rahona ny zava-drehetra, tsy mila tariby intsony
4 Tsy ho an'ny rehetra, fa eny ho an'ny maro
Fahaleovan-tena mandritra ny tontolo andro
Raha mila mitaky zavatra amin'ny solosaina finday ianao dia maharitra anao tontolo andro izany fa tsy mila mampifandray azy amin'ny charger. Noheveriko foana fa inona no mahatsara an'ireo tranga neoprene tery (sy tsara tarehy) ireo raha tsy manam-paosy hametrahana ny charger. Tsy hoe mitaraina momba ny fizakantenan'ny MacBook 2009 izay mbola ampiasaiko isan'andro aho ary manolotra mora foana ahy ora maro hampiasaina, na dia kely noho ny fizakantenan'ny MacBook Air teo aloha aza, fa samy tsy navelany hiala tao an-trano aho. azo entina eo ambanin'ny sandrinao nefa tsy mila mitondra ny charger. Ny 9 ora fizakan-tena natolotry ny MacBook vaovao mihoatra ny ampy azony atao ny mametraka azy ao anaty kitapo ary manadino ny charger any an-trano, satria tsy dia mila izany ianao alohan'ny hiverenanao aminy amin'ny alina.
Kitendry feno ary ahazoana aina kokoa
Raha misy zavatra tsy azo sorona ao anaty solosaina finday dia ny fitendry, farafaharatsiny ho an'ny maro amintsika izay manoratra amin'ity karazana solosaina ity. Ny fahazoana klavie feno amin'ny solosaina kely sy mahia toy izany dia tsy tokony ho asa mora, saingy tsy vitan'ny hoe nanao fotsiny i Apple fa nahavita ihany koa ny lakile dia 17% kokoa, 40% mahia, ary tsy misy ny lakile hitanao amin'ny klavier mahazatra. Ny backlighting, tena fifaliana amin'ny fanoratana amin'ny toe-javatra maivana, dia nohatsaraina tamin'ny alàlan'ny fampiasana LED tsirairay isaky ny lakile, izay manatsara ny hazavana nefa tsy manimba ny bateria.
Ao anaty rahona ny zava-drehetra, tsy mila tariby intsony
Apple dia namorona ny solosaina findainy tamin'ny taonjato faha-XNUMX niaraka tamina toerana voalohany: tsy ilaina ny tariby. Noho io antony io dia noheveriny fa mety ny manome azy io ho mpampitohy ny peripheraly. Ho an'ity, nanome ny solosaina finday karazan-java-drehetra fifandraisana, anisan'izany ny WiFi 802.11ac sy Bluetooth 4.0. Aza adino ny tariby mampifandray ny totozy, izay tsy ilainao ihany koa amin'ny Trackpad mora tohina amin'ny tsindry izay manao hetsika samihafa arakaraka ny fahasarotantsika. Tariby bateria? Tsy ilainao izany. Tariby fitahirizana USB? miaraka amin'ny serivisy fitahirizana rahona ihany koa. Tsy manana Internet ve ianao? Ho anao dia manana iPhone mamela anao hizara Internet ho azy amin'ny kaonty iCloud mitovy ianao. Ary ho an'ireo fotoana tsy manam-paharoa tsy maintsy ampifandraisinao amin'ny fitaovana iray, satria manana seranan-tsambo USB-C manaraka ianao izay mety amin'ny zava-drehetra: famandrihana, fivoahan'ny horonan-tsary, USB, sns.
Mazava ho azy fa efa manana ny adaptatera ofisialy Apple azonao atao ianao ahafahanao manova ny USB-C ho USB mahazatra, na mampitombo ny trondro misy ary afaka mahazo USB-C, HDMI ary USB mahazatra. Ho an'ny vidiny maotina 89 € ny voalohany ary € 19 ny faharoa hamahanao ny olan'ny fifandraisana amin'ny telegrama raha olana aminao izany. Saingy tsy izany no hevitr'i Apple, izay maniry anao hanary ny tariby. Nanao toy izany koa tamin'ny fanesorana ireo kapila DVD avy amin'ny MacBook Air, iMac, ary Mac Mini, ary manolotra superdrive ivelany ho an'ireo tsy te hihambahamba.
Tsy ho an'ny rehetra, fa eny ho an'ny maro
Araka ny asehon'ny lohatenin'ny lahatsoratra, ny MacBook vaovao mety tsy ny solosaina finday mety indrindra ho an'ny rehetra, saingy ho an'ny mpampiasa maro izay mitady marina izay tian'ny Apple hatolotra: fahalalahana tsy misy tariby. Apple dia maniry izany hitovy amin'ny fandraisanao ny iPad-nao ary hivoahanao tsy miahiahy momba ny zavatra hafa rehetra, ankehitriny raiso ny MacBook anao ary manaova toy izany koa. Ny dingana voalohany mankany amin'ny laptop Apple ho avy dia efa nalaina, inona no ho manaraka?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny MacBook vaovao, ny laptop tena izy fa tsy ho an'ny rehetra
NanoKanpro dia hoy izy:
Fa kosa, ny solosaina finday ho an'ny ankamaroan'ny olona. Ny rahona ihany ve no ampiasainao? Ary raha raisina ny hafainganan'ny famindrana ary arakaraka ny haben'ny fisie dia azonao atao ny mijanona mandritra ny ora maro miandry ao an-dakilasy irery, raha efa nandany ny faran'ny herinandro ny mpiara-mianatra aminao, ianao kosa, hiandry ny fampakarana ilay rakitra. Amin'ny alàlan'ny USB dia efa naka tahaka ny rakitra maromaro aho tao anatin'ny iray minitra. Tsy maintsy miandry minitra maromaro ianao ..
Tena hadalana ihany koa satria:
1º Tsy afaka manonta rakitra ianao satria ny mpanonta dia tsy Airplay ary lojika fa tsy mifanaraka amin'ny USB-C izany, noho izany dia mila mitondra ilay adaptatera ianao.
2º Ary misy antony maro hafa noho izay azonao eritreretina ny mandeha miaraka amin'ireo adapter.
Tompokolahy, aza mitady fanamarinana satria tsy misy.
Valio amin'i NanoKanpro
Tsy mitombina ny hevitrao:
- Tsy mila mpanonta AirPlay ianao raha hampiasa azy amin'ny Mac tsy misy tariby. Izay mpanonta WiFi, na mpanonta iraisana zaraina amin'ny tamba-jotra dia azo ampiasaina amin'ny Mac. Mety ho diso ianao amin'ny fieritreretana fa ny iOS dia mitovy amin'ny OS X, rehefa tsy misy ifandraisany amin'izany. Na amin'ny iOS aza, tsy ilaina ny mpanonta printy ho AirPrint vao afaka mampiasa azy io, efa misy ny vahaolana mamela azy io.
- Minitra handefasana rakitra amin'ny rahona? 99% amin'ireo fisie izay ananako eo amin'ny rahona no maka segondra vitsivitsy alefa. Hafa ny zavatra te-hizara rakitra multimedia. Raha izany dia izany no anananao USB-C. Tsy ho ela dia io no fenitra ampiasain'ny tsirairay, raha ny tena izy, Google dia efa nanambara ny solosaina findainy vaovao miaraka amin'ilay mpampifandray.
Araka ny nolazaiko tao amin'ilay lahatsoratra, tsy ho solosaina finday ho an'ny rehetra izy io, ary azo antoka fa ho tafiditra ao anatin'io vondrona io ianao noho ny zavatra lazainao, fa aza mieritreritra fa ny mpampiasa rehetra dia manana filàna mitovy aminao.
Nano Kanpro dia hoy izy:
Segondra hahazoana? Heveriko fa hampakatra Word na Excel ianao, mampihomehy ireo antontan-taratasy ireo. Izaho dia mpahay siansa amin'ny solosaina ary manana fampahalalana bebe kokoa aho. Ka tsia, ny fifandraisana tsy misy tariby dia tsy mandeha amiko. Ary avy eo izay mpianatra ara-dalàna dia misalasala be aho fa mety ho mora ny mizara antontan-taratasy amin'ny olona iray avy amin'ny «Apple». Andeha ho marin-toetra sy mazava isika, any amin'ny oniversite dia misy mombamomba marobe, fa tsy ny Apple daholo. Ka eo amin'ireo mpampiasa dia milay be i Apple ary tena milay, fa hoy aho, tsy ny rehetra no "Apple."
Momba ny USB-C, tsy lava loatra? Miala tsiny, izahay amin'izao fotoana izao, tsy herintaona na roa manomboka izao. Ka adaladala i Luis. Fialan-tsiny daholo izany tsy maintsy amidy ny kojakoja izany amin'ny kijana. Tian'izy ireo hitsahatra tsy mampiasa tariby intsony ianao? fa avy eo hivarotra adaptatera anao aho amin'ny € 89 .. Hahaha ..
Ary miteny amin'ny ankapobeny aho, misy mpampiasa mila fifandraisana ara-batana. Raha te-hiaraka amin'ny Mac Book anao tsy misy ifandraisany amin'izao tontolo izao ianao fa mifandray amin'ny tontolonao, tsara, fa izany no mitranga anio. Mpampiasa Mac amin'ny lafiny iray, ary mpampiasa mahazatra amin'ny lafiny iray. Izay no tena tian'ny mpampiasa Mac, mankanesa any amin'ny bolanao sy ny bolanao. Ny zava-drehetra ho anao.
Marina izany, Google koa dia nanolotra ChromeBook, scam iray hafa indray. Fa farafaharatsiny mitondra anao fifandraisana roa izany ary tianao tsy hanome anao safidy hafa izany.
Ho hitanao, ao anatin'ny 6 volana, tsy maintsy esorin'izy ireo ny MacBook "S" izay misy mpampitohy USB. Hohitanao.
Valiny tamin'i Nano Kanpro
Averiko any amin'ny lohatenin'ilay lahatsoratra ianao sy ny atiny: TSY ho an'ny rehetra. Betsaka ny mpampiasa solosaina finday ivelan'ny oniversite.
Betsaka ny fanehoan-kevitra mahatsikaiky momba ny vokatra Apple. Tadidiko fa nihomehy ilay iPhone vaovao i Steve Ballmer: https://www.youtube.com/watch?v=eywi0h_Y5_U
Ary jereo ny misy antsika: singa 75 tapitrisa amidy ao anatin'ny telo volana fotsiny.
Ary tsy hivarotra intsony ianao. Ny vokatra Apple dia amidy mandritra ny volana vitsivitsy aorian'ny fandefasana azy, avy eo mijanona. Toy izany foana modely aorian'ny modely. Fa hey, jereo, tsy maninona izany. Mpiaro an'i Apple ianao. Mieritreritra ny tenanao ho ambony ianao.
Ity Mac Book vaovao ity dia toa fisolokiana ary tsy ho ahy ihany, fa ho an'ny olona maro, mpampiasa vola, eo amin'izy ireo, sns. Matokia fa afaka volana vitsivitsy dia handefa fanavaozana amin'ny USB izy ireo. Hohitanao.
Mampiseho izany fa mpifaninana tanteraka amin'ny tontolon'ny Apple ianao (mode ironika ON):
Varotra IPhone 5S:
Telovolana 1 2014: 51 tapitrisa
Telovolana faha-2 2014: 43.7 tapitrisa
Telovolana 3 2014: 39 tapitrisa
Telovolana faha-4 2014: 41 tapitrisa
Eny tokoa, araka ny nolazainao tamim-pahendrena, ny varotra aorian'ny fianjeran'ny telovolana voalohany ary tsy mivarotra iray hafa izy ireo ... tsara (mody mampihomehy OFF). Mbola eo amin'ny tontolonao izao ianao ary manolo-tena amin'ny fandefasana bilaogy Apple, fa hanohy hankafy ny fitaovanay izahay nefa tsy hiditra amin'ireo pejy fifaninanana hiteny tsy misy dikany.
Tena tsotra. Toy ny hoe nisy dikany ireo olona an-tapitrisany ireo. Fantatrao sahady fa ny Android dia manome avo roa heny ny fizaran'izao tontolo izao amin'ny iOS. Ary ho hitanao ny fihinan'ny Windows ny iOS noho ny fampiraisana.
Fantatrao? midina ny zavatra rehetra miakatra ary lehibe kokoa ny mpampiantrano. Ka aza apoaka ny tratranao ary ataovy ao anaty ny kibonao ... Hahaha
Miresaka momba ny tarehimarika ianao fa mbola tsy manamarina ny vidin'ny Mac Book miaraka amina processeur M ary ny Mac Book Air ary mihoatra izany amin'ny heriny nefa lafo kokoa izy io ary vitsy ny fifandraisana.
Fantatrao, Mac Book hanoratana Teny ...
Mac Book Air handefasana azy,
Mac Book Pro hanovana sary vitsivitsy nalaina tamin'ny IPhone.
Ary avy eo Ipad iray hahita azy ..
Hahahaha .. Ka, amin'ny farany, mila mandany mihoatra ny € 6000 ianao vao afaka mandefa mailaka, manoratra lahatsoratra ary mamerina sary roa na telo.
Etsy ankilany, manao ny zava-drehetra amin'ny Surface Pro 3 tsy misy fetra aho ary tsy dia mahafoy tena loatra.
Miarahaba, amin'ny ho avy.
Toy izao ny fijerin'ny Instagram amin'ny Apple Watch
Misy fanavaozana vaovao ho an'ny Apple TV izao